Cabashooyinka iyo magdhaw - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Cabashooyinka iyo magdhaw
Cabashooyinka iyo magdhaw
Marnaba ma sahlana in la ogaado goobta saxa ah ee loo gudbiyo cabashada. Ma aha wax aan caadi ahayn in cabashada ay taabato qodoba badan, oo mid kasta ay hay’ad gooni ah ay xallinayso.
Waxaad xaq u leedahay in aad gudbiso cabashooyin laxiira wax kasta oo ah adeegga caafimaadka ee Patientkontoret. Patientkontoret waxayt bixisaa haggis iyo talo aan eex lahayn oo laxiriira ikhtiyaaradaada ku aaddan gudbinta cabasho ama doonis magdhaw. Hase ahaatee, cabashooyinka waxa kale oo loo gudbin karaa si toos ah hay’adda ay khusayso eek a hawlgalaya nooca cabashada ama magdhawga.
Patientkontoret waxay kaa gargaari kartaa habaynta cabashada ama ugudbinta hay’adda saxda ah. Patientkontoret waxay kale oo ay ku siin karaan haggis dheeraad ah iyo macluumaadka xuquuqda bukaanka. Kala xiriir Patientkontoret: www.patientkontoret.rm.dk.
Dhammaan bukaanka waxa ay haystaan mashruuca magdhawga dadweynaha. Mashruucu wuxu daboola caymis ahaan dhaawaca ama waxyeelo kaa soo gaartay daawayn cisbitaal dadweyne, dhakhtarkaaga, cisbitaal gaar ah, ama xirfadyahano caafimaad oo u idman in ay bixiyaan darteel gaar ahaaneed.
Mashruucu wuxu kale oo daboolaa caymis ahaan dhaawac ama waxyeelo ay keeneen dawooyin. Waa shaqada Patienterstatningen inay hubiyaan in bukaanku helo maghdawga ay xaqa u leeyihiin sharci ahaan. Dhaawcayada waa in loo sheego Patienterstatningen – tani waa adeeg bilaasha ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee laxiriira Patienterstatningen, fadlan booqo www.patienterstatningen.dk, meeshaas oo aad ka minguurin karto foomamka iyo xaashiyaha. Patientkontoret waxay halkan u joogtaa inay ku gargaarto.